I-Broccoli: izakhiwo eziwusizo, ukuphikisana nokulimaza emzimbeni womuntu, ikakhulukazi, kwabesifazane abancelisayo, kanye nokuqukethwe kwekhalori - Isitshalo semifino - 2020
Izakhiwo eziwusizo zohlobo lwe-broccoli kanye nokuphikisana nokusetshenziswa kwawo
Iklabishi ye-Broccoli, eyaziwa kusukela ezinsukwini zaseRoma lasendulo, isiye yasakazeka eRussia. Naphezu kokuba isihlobo esiseduze kakhulu se-cauliflower, esithandwa kakhulu ezweni lakithi, abantu abaningi namanje bayamsola. Futhi lokhu kuyiphutha elikhulu, ngoba i-broccoli ibhekwa njengento ewusizo kakhulu kuzo zonke izinhlobo zeklabishi.
Sizokutshela indlela le mifino ewusizo ngayo umzimba womuntu ngokujwayelekile, ikakhulukazi impilo yabesifazane. Uzothola ukuthi mangaki amakholori e-broccoli nokuthi yiziphi izinto ezibalulekile ezitholakala empilweni.
Izakhiwo eziwusizo zomzimba womuntu
Sebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa
Kungenzeka yini ukuthi ube ne-pancreatitis?
I-Broccoli - isitolo sangempela samavithamini namamineraliEkubunjweni kwayo, ingafaniswa nama-multivitamine amahle, kodwa umkhiqizo wemvelo. Kuzophinde kube ukutholakala kweqiniso kulabo asetshenziselwa ukubala okuqukethwe kwe-caloric kokudla. Zingaki ukhalori eklabishi? Amagremu ayi-100 alokhu iklabishi aqukethe kuphela 34 kcal. Ngesikhathi esifanayo isabelo esinjalo saba yi-2.82 g amaprotheni, kuphela u-0.37 g wamafutha no-6.64 g we-carbohydrate.
Ngokungafani namakholori, kunamavithamini amaningi kuwo.
Ngomthamo we-vitamin C, i-broccoli idlula kakhulu abaholi ababonakalayo njengelamula ne-orange.
Kukhona u-vitamin U, okudingekayo ekuphulukisweni kwezilonda kanye nezimo.
I-Vitamin PP, ehilelekile emisebenzini ye-redox emzimbeni futhi ikhuthaza ukukhula kwezicubu.
Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa kwe-broccoli kuqukethe amavithamini weqembu B, ikakhulukazi i-folic acid, i-thiamine ne-riboflavin, kanye namavithamini A, K, E.
Kumele futhi kuqaphele lezo zakhi ezincane nezama-macro njenge magnesium, i-sodium, i-phosphorus, i-potassium, i-calcium, insimbi, i-zinc, ithusi, i-manganese, i-selenium, ngayinye edlala indima ekusebenzeni kahle komzimba womuntu.
Imithi yokwelapha yale mifino:
Ukuvimbela I-Cancer Nokulawula. Ucwaningo lwesimanje luye lwabonisa ukuthi le iklabishi ingasiza ukulwa nezinhlobo ezithile zegciwane, njengebele, i-ovarian kanye nomdlavuza wesikhumba. I-sulfufane ivimbela ukuthuthukiswa kwamangqamuzana omdlavuza, futhi i-synergin ne-indole-3-carbinol iyabhubhisa futhi iqinise isimiso somzimba sokuzivikela.
Kunciphisa ingozi yokuhlaselwa yinhliziyo kanye nemivimbo. Ukusetshenziswa njalo kwalokhu imifino kuthinta kahle umsebenzi wenhliziyo, kanye nesimo sezindonga zegazi, okukuvimbela ukuvimbela izifo ezinjengokuhlasela kwenhliziyo, ukushaya isifo, isifo samathambo noma isifo sokuqina kwesifo somzimba. I-broccoli choline (i-vitamin B4) ne-methionine ibandakanyeka ekuqedeni kwe-cholesterol emzimbeni, okweqile okuholela ezinkingeni ohlelweni lwe-cardiovascular.
Ithuthukisa ukusebenza komgudu wokugaya ukudla. Ukuqukethwe kwe-fiber ephezulu kusiza ukuvuselela izinqubo zokugaya, ukuthuthukisa umsebenzi wamathumbu nokuxazulula inkinga yokuqothulwa, okufaka okungapheli. Ngokugqugquzela ukuvikeleka kwe-bile, i-broccoli isiza ukuthuthukisa isimo sesibindi nesilbladder. Ngaphezu kwalokho, uye waba nethonya ekususweni kwamangqamuzana afile, ama-slags ngisho nama-ion esindayo.
Isiza ekubuyiseni ekuguleni. I-broccoli iqukethe izinto ezisheshisa inqubo yokuvuselelwa kwamangqamuzana nama-tishu, esiza umzimba ukuba ululame ngokushesha. I-Phytoncides ikhulisa umkhuhlane wonke futhi igweme ukukhiqizwa kwezincane ezincane eziyingozi.
Ingajwayelekile ushukela wegazi. Ochwepheshe abaningi batusa ukufaka le mifino ekudleni abantu abanesifo sikashukela, ngoba iqukethe i-sulforaphane, enganciphisa amazinga e-glucose futhi ilawula ukukhiqizwa kwe-insulin.
Ithuthukisa isimiso sezinzwa ngenxa yobukhona be-vitamin B1. Abantu abanenkinga yokukhathazeka, inkumbulo embi, ukucindezeleka njalo kufanele kuhlanganise nalesi sitshalo ekudleni kwabo, ngoba kucebile ku-thiamine, ebaluleke kakhulu ebuchosheni.
Umphumela omuhle embonweni. Ama-carotenoids, okukhona kuwo wonke amathanga nama-izaqathi, angavimbela i-cataracts ngokuqinisa i-retina ne-lens.
Ukunakekelwa komzimba. Kuyini okuhle kumzimba wabesifazane? Kufanelekile ukunakekelwa ngokukhethekile kulo mkhiqizo futhi ngoba kusiza kakhulu ukulahlekelwa isisindo nokulahla i-cellulite. Izakhi zalo ezizimele zisiza ukuhlanza amathumbu we-toxin, ukulawula izinqubo zemithi emzimbeni.
Inani elikhulu le-fiber linikeza umuzwa wokugcwala ohlala njalo ngesilinganiso esincane sokudla esidliwe.
Ukunciphisa i-"peel orange" kungenxa yokuthi uketshezi oludlulayo kukhishwa ngokushesha futhi ngokuphepha emzimbeni, ngenxa yalokho isikhumba sibe bushelelezi futhi siphume.
Ukuvimbela i-prostatitis nomdlavuza we-prostate. Ukwakhiwa kwemifino kuhlanganisa ama-enzyme angabi nomphumela omuhle ekubambeni kwempilo yabantu, kodwa futhi asize ekuvimbeleni ukuthuthukiswa kwezifo ezinzima zesifo sofuba.
Ukuphikisana okuphelele kokusetshenziswa kwe-broccoli kungaba kuphela okwehliswayo kulesi sitshalo. Ngenhlanhla, kuyinto engavamile kakhulu. Ngaphandle kwalokho, kukhona ngesimo esisodwa noma esinye cishe cishe wonke umuntu. Izivimbelo zihlobene ikakhulukazi nendlela yokusetshenziswa.
Awukwazi ukusebenzisa i-broccoli yokupheka umhluzi, ngoba I-decoction yayo iqukethe izinto ezithwala umzimba emzimbeni (i-adenine ne-guanine). Ezisobho, le iklabishi, futhi, kufanele ifakwe ekupheleni, lapho isobho selikulungele.
Kumele sikhumbule ukuthi ngokugaya isikhathi eside, ikakhulukazi ngamafutha amaningi, iklabishi ngeke ilahlekelwe kuphela yizo zonke izindawo zayo ezizuzisayo, kodwa futhi idala ama-carcinogens.
Ukusetshenziswa kweklabishi eluhlaza kunqatshelwe abantu abane-acidity ephezulu yesisu nalabo abanezifo zama-pancreas.
Kwabesifazane abakhulelwe, lo mkhiqizo kubalulekile ngezizathu eziningana:
Ikholori ephansi nezakhiwo eziphakeme zokudla okunomsoco kukuvumela ukuthi ulawule inzuzo yesisindo.
Okuqukethwe okuphezulu kwe-vitamin C kukhuthaza ukuzivikela komzimba.
I-folic acid ibalulekile ekuthuthukiseni uhlelo lwezinzwa zesisu.
I-calcium iyadingeka impilo yomama ozayo kanye nengane.
Ukunciphisa amazinga kashukela kubalulekile kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sokushukela kwesifo sikashukela.
I-Broccoli - umkhiqizo we-hypoallergenic, okungenani okungenani kokuphikisana, ngakho-ke ngowokuqala ukuvunyelwa ukufaka ekudleni komama okhulelwe, emva kokuzalwa kwamaviki angu-4-5, ungayifaka kancane kwimenyu uma uncelisa ingane. Abaningi bezingane basabela kahle ekusungulweni kwalemifino, kuqala ekudleni komama, bese kuthi, kusukela ezinyangeni ezingu-6-7 kanye nokudla okuhambisanayo.
Ngingayithola yini nge-pancreatitis?
Ngesikhathi sokukhushulwa kwe-pancreatitis, ungasebenzisa lolu hlobo lweklabishi ngesimo sezinsipho zomhlabathi, izinhlayiya ze-steam (ungafunda ngemithetho yokupheka izitsha ze-broccoli lapha). Odokotela batusa ukuba bangene ngokushesha futhi kuphela uma kuvunyelwe kahle futhi kungabangeli ukuqhuma, ukuguquka nezinye izinkinga ngokugaya. Ekuqaleni, ngemva kokungena, kudingeka uqaphele ikakhulukazi futhi unqabe ukusetshenziswa lapho izimpawu zokuqala zivela.
Esigabeni sokuxoxisana asikho imingcele yokusetshenziswa.
Ingxenye enkulu yansuku zonke ye-broccoli kuzo zonke izigaba zesifo akufanele idlule 200 g
Sincoma ukufunda ezinye izihloko zethu:
Yiziphi izinhlobo ezihlukahlukene ze-broccoli?
Uyini umehluko phakathi kwe-broccoli nekholifulawa?
Indlela yokutshala i-broccoli emhlabathini ovulekile?
Ukubamba iqhaza, kuqhubeka nje ukuphinda ukuthi le broccoli iyimifino ewusizo kakhulu, okumele ibe khona ekudleni. Indlela yokupheka ukuze uthole inzuzo enkulu? Ukupheka noma ukupheka okufishane kubhekwa njengendlela echane kakhulu, ngoba ngesikhathi sokwelashwa kwesikhashana eside izinto eziningi eziwusizo zilahlekile. Ungayisebenzisa le mifino njengesidlo esihlukile, njengesitsha sehlangothini, futhi njengengxenye yemifino noma i-casseroles.